पुष्प-साम्राज्ञीको ‘मारुनी’ लाई ‘साहो’ थ्रेट ! « Naya Page
पुष्प-साम्राज्ञीको ‘मारुनी’ लाई ‘साहो’ थ्रेट !
प्रकाशित मिति : 30 August, 2019 4:45 pm
काठमाडौं, १३ भदौं । आज (शुक्रबार) बाट फिल्म ‘मारुनी’ प्रदर्शनमा आएसँगै अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह र अभिनेता पुष्प खड्काको अग्नी परीक्षा शुरु भएको छ ।
दुईले पहिलो पटक स्क्रिन साझेदारी गरेका हुन् । मेकिङ, गीत संगीत, स्टारकास्ट र ट्रेलरका कारण राम्रो हाइप निर्माण गरेको यो फिल्मले सुस्ताएको नेपाली फिल्मको व्यापार चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पारिवारिक फिल्म बनाउन खप्पिस मानिने नवल नेपाल यस फिल्मका निर्देशक हुन् ।
उनी निर्देशित पछिल्लो फिल्म ‘मंगलम’ ले दर्शकको मन जित्न सफल भएको थियो । यो फिल्मबाट अभिनेता पुष्पले राष्ट्रिय अवार्ड समेत जितेका थिए । अभिनेता पुष्प र निर्देशक नेपालको दोस्रो सहकार्य कस्तो हुने हो ? सबैमा चासोको विषय बनेको छ ।
पुनम गौतम निर्मित यस फिल्ममा नव अभिनेत्री रेविका गुरुङको पनि प्रमुख भूमिका छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्ममा रेविका र पुष्प श्रीमान–श्रीमतीको भूमिकामा छन् ।
यो फिल्मले पुरूष भएर जन्मिएकी तर लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनेकी एक ‘ट्रान्सजेन्डर’ पात्रको प्रेमकथा भन्छ । फिल्ममा अभिनेत्री साम्राज्ञीले ‘ट्रान्सजेन्डर’ युवतीको भूमिका निभाएकी छन् । डेब्यू फिल्म ‘ड्रिम्स’ पछि एकैखाले भूमिकामा अभिनय गर्दै आइरहेकी उनलाई पहिलो पटक फरक भूमिकामा हेर्न निकै रोचक हुने देखिन्छ । उनी यस फिल्ममा आफ्नो बोल्ड भूमिका रहेको बताउँछिन् । पुष्पप्रति उनको पागलप्रेममा फिल्म आधारित छ ।
तीजको छेकोमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मसँग भिड्न हलमा अन्य कुनै नेपाली फिल्म छैनन् । तर, साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत फिल्म ‘साहो’ पनि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । यो फिल्म ‘मारुनी’ का लागि सबैभन्दा ठूलो थ्रेट हो । निर्माताले राम्रो शेयर पाउने मल्टीप्लेक्समा ‘साहो’ का कारण ‘मारुनी’ ले अत्यन्त न्यून शो पाएको छ । सिंगल पर्दा भने अधिकांश पाएको छ । तर, निर्मातालाई सिंगलभन्दा मल्टीप्लेक्सको व्यापार महत्वपूर्ण रहन्छ ।
‘साहो’ प्रति दर्शकको चासो र मल्टीप्लेक्सले बाँडेको सोज हेर्दा ‘मारुनी’ लाई बक्सअफिसमा लामो रेसको घोडा बन्न सहज हुने देखिएको छैन । नेपाली दर्शकको पहिलो रोजाइ अझै नेपाली फिल्म हुन नसकेको अवस्थामा ‘साहो’ सँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन ‘मारुनी’ लाई सकारात्मक प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्छ । यो फिल्मको इनिसियल व्यापार ‘साहो’ ले विथोल्नेमा दुईमत छैन । तर, आइतबारबाट फिल्मको व्यापार ‘वर्ड अफ माउथ’ मा निर्भर रहने छ ।
राजा प्रधान, दर्शन केसी र मिना क्षेत्री सह निर्माता रहेको यस फिल्मको कथा गोविन्द फुँँयाल र निर्देशक नेपालले लेखेका हुन् । फिल्मलाई संजय लामाले खिचेका हुन् । सुशील क्षेत्री, अर्जुन श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, शंखर सेढाइलगायतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय रहेको छ । मित्र डि.गुरुङ फिल्मका सम्पादक हुन् । यो फिल्म सफल भएको खण्डमा सिक्वेल बनाउने निर्माता गौतमले घोषणा गरिसकेकी छन् । असफल भए कहिल्यै फिल्म नबनाउने उनको भनाई छ ।